‘Kuphapheleni Ukuthandaza’ | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Yibani ngabaphilileyo engqondweni, nikuphaphele ukuthandaza.”—1 PET. 4:7.
Ziziphi iindlela zokuthandaza ekusafuneka uphucule kuzo?
Kutheni kufuneka amaKristu okwenene athandaze ngokuqhubekayo?
Ngubani oncedakalayo xa uthandazela abanye?
1, 2. (a) Kutheni kubalulekile nje ukuba ‘sikuphaphele ukuthandaza’? (b) Yiyiphi imibuzo esimele sizibuze yona ngokuphathelele umthandazo?
OMNYE owayesakusebenza ebusuku uthi: “Elona xesha kunzima ngalo ukuhlala uthe qwa kuxa kuza kuthi qheke ukusa.” Bamele ukuba baninzi abavumelana naye. Namhlanje amaKristu akwimeko efanayo kuba sele buhambile ubusuku kule nkqubo yezinto ingendawo kaSathana. (Roma 13:12) Bekuya kuba yingozi gqitha ke ukulala kanye ngoku sele kuza kusa! Kubalulekile ukuba ‘siphile engqondweni’ ukuze sithobele esi sibongozo seZibhalo sokuba ‘siphaphele ukuthandaza.’—1 Pet. 4:7.
2 Ngenxa yexesha esiphila kulo, kuya kuba bubulumko ukuzibuza oku: ‘Ndikuphaphele kangakanani ukuthandaza? Ngaba ndiyathandaza ngandlela zonke, yaye ndihlala ndithandaza? Ngaba isegazini into yokuthandazela abanye, okanye ndithandazela isiqu sam kuphela? Ubaluleke kangakanani umthandazo ukuze ndisinde?’
QHUBEKANI NITHANDAZA NGANDLELA ZONKE
3. Ziziphi ezinye iindlela zokuthandaza?
3 Kwincwadi eyayisiya kwabase-Efese, umpostile uPawulos wabhekisela kuko “konke ukuthandaza,” okanye zonke iindlela zokuthandaza. (Efe. 6:18) Xa sithandaza sidla ngokusoloko sicela uYehova ukuba asincede kwiintswelo neengxaki esinazo. Ngenxa yothando, ‘uMphulaphuli wemithandazo’ uyaziva izicelo zethu. (INdu. 65:2) Noko ke, simele sizame ukucinga nangezinye iindlela zokuthandaza kuye. Ezi ndlela ziquka ukumdumisa, ukumbulela nesikhungo.
4. Kutheni simele sihlale simdumisa uYehova xa sithandaza?
4 Sinezizathu ezininzi zokuba simdumise ­uYehova xa sithandaza. Ngokomzekelo, xa sicinga ‘ngemisebenzi yakhe yamandla nobuninzi bobukhulu bakhe,’ sitsho sifune ukumdumisa. (Funda iNdumiso 150:1-6.) Kwiivesi ezintandathu ­ezikwiNdumiso 150 ­sibongozwa izihlandlo eziyi-13 ukuba sidumise uYehova! Ngenxa yokumoyika uThixo, umqambi wenye indumiso wathi: “Ndikudumise izihlandlo ezisixhenxe ngosuku ngenxa yezigwebo zakho zobulungisa.” (INdu. 119:164) ­UYehova ukufanele ngokwenene ukudunyiswa. Ngaba ke, asifanele simdumise “izihlandlo ezisixhenxe ngosuku” kwimithandazo yethu, into ethetha ukumdumisa rhoqo?
5. Kusikhusela njani ukubulela xa sithandaza?
5 Ukubulela yenye indlela ebalulekileyo yokuthandaza. UPawulos wabongoza amaKristu esixeko saseFilipi wathi: “Musani ukuxhalela nantoni na, kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo.” (Fil. 4:6) Kuyasikhusela ukumbulela ngokunyaniseka uYehova xa sithandaza. Oku kubaluleke ngokukhethekileyo ekubeni siphila kwimihla yokugqibela phakathi kwabantu “abangenambulelo.” (2 Tim. 3:1, 2) Ihlabathi lizaliswe ngabantu abangenambulelo. Ukuba asilumkanga, kunokuba lula ukuzibona sele sinjalo nathi. Ukubulela kuThixo xa sithandaza kusenza saneliseke kuze kusikhusele singaziboni sele sihlala ‘simbombozela, sikhalaza ngobomi esibuphilayo.’ (Yude 16) Ukongezelela koko, xa iintloko-ntsapho zibulela kwimithandazo eziyenzayo neentsapho zazo, oko kukhuthaza abafazi nabantwana bazo ukuze babe nombulelo.
6, 7. Yintoni isikhungo, ibe sinokusenza xa kutheni?
6 Isikhungo ngumthandazo onyanisekileyo ophuma emazantsi entliziyo. Ziziphi izinto esinokumkhunga ngazo uYehova? Sinokwenjenjalo xa sitshutshiswa okanye sigula gqitha. Siyaqondakala isizathu sokuba sisenza isikhungo kuThixo xa sithandaza kwiimeko ezinjalo. Ngaba ezi kuphela kwezihlandlo esinokwenza ngazo izikhungo kuYehova?
7 Cinga ngomthandazo ongumzekelo owenziwa nguYesu, uze uphawule oko wakutshoyo ngegama likaThixo, ngoBukumkani Bakhe nangokuthanda Kwakhe. (Funda uMateyu 6:9, 10.) Eli hlabathi litshone zwabha kubungendawo, yaye oorhulumente babantu boyiswa kukulungiselela abantu babo nkqu nezona mfuno zisisiseko. Ngoko ke, simele sithandazele ukuba igama likaBawo wethu wasezulwini lingcwaliswe buze uBukumkani bakhe bulutshayele nya ulawulo lukaSathana emhlabeni. Eli ikwalixesha lokukhunga kuYehova ukuze kwenziwe ukuthanda kwakhe emhlabeni njengasezulwini. Ngoko ke, simele sihlale siphaphile, sithandaze ngandlela zonke.
8, 9. Kutheni singamele sikhawuleze simgxeke uPetros nabanye abapostile ngokulala kwabo kumyezo waseGetsemane?
8 Nakuba umpostile uPetros wabongoza amaKristu ukuba ‘akuphaphele ukuthandaza,’ wakha wasilela ukwenjenjalo ngasihlandlo sithile. Ngomnye wabafundi abalalayo ngoxa uYesu wayethandaza kumyezo waseGetsemane. Nasemva kokuba uYesu ebaxelele ukuba ‘bahlale belindile yaye bethandaza ngokuqhubekayo,’ basilela ukwenjenjalo.—Funda uMateyu 26:40-45.
9 Kunokuba simgxeke uPetros nabanye abapostile ngokusilela kwabo ukuhlala bethe qwa, simele sikhumbule ukuba izinto ezenzeka ngolo suku zaziwaqongqothe onke amandla kuloo nyama yabo ibuthathaka. Baye baxakeka belungiselela iPasika kwandula ke ebusuku yangumsitho wayo. Emva kwawo uYesu wasungula iSidlo Sangokuhlwa SeNkosi, emisela umzekelo wendlela esasiza kuqhubeka sisenziwa ngayo ukukhumbula ukufa kwakhe. (1 Kor. 11:23-25) “Emva kokuvuma iindumiso, baphuma baya eNtabeni yemiNquma,” behamba umgama ovakalayo njengoko babenqumla kwizitrato ezincinane zaseYerusalem. (Mat. 26:30, 36) Kumele ukuba kwakusele kuza kuthi qheke ukusa. Mhlawumbi nathi sasiya kulala ukuba yayisithi. Kunokuba agxeke abo bapostile babediniwe, ngothando uYesu wathi, “umoya unentumekelelo, kodwa inyama ibuthathaka.”
Nakuba uPetros wakha wakhubeka, wafunda ukuhlala ‘ekuphaphele ukuthandaza’ (Funda isiqendu 10, 11)
10, 11. (a) Sisiphi isifundo esafundwa nguPetros kwinto eyamehlela eGetsemane? (b) Ikuchaphazela njani wena into eyehlela uPetros?
10 UPetros akazange ayilibale into eyamehlelayo apho eGetsemane. Wafunda kabuhlungu koko kusilela kwakhe ukuhlala ephaphile. Ngaphambi koko, uYesu wayethe kubo: “Nonke niya kukhubeka ngam ngobu busuku.” Yena ke uPetros waphika esithi: “Nangona bonke abanye beya kukhubeka ngawe, andisayi kuze ndikhubeke!” Emphendula, uYesu waxelela uPetros ukuba uza kumkhanyela izihlandlo ezithathu. Ezithembile, uPetros wathi: “Kwanokuba kuya kufuneka ndife nawe, andisayi kuze ndikukhanyele.” (Mat. 26:31-35) Kuyo yonke loo nto, uPetros wakhubeka, kanye njengokuba uYesu wayetshilo. Ekhathazwa kukukhanyela kwakhe uYesu, uPetros “walila ngokukrakra.”—Luka 22:60-62.
11 UPetros umele ukuba wafunda isifundo koku ibe wada wayeka ukuzithemba ngokugqithiseleyo. Kuyabonakala ukuba wancedwa kukuthandaza. Kaloku, livela kuPetros eli cebiso lokuba ‘sikuphaphele ukuthandaza.’ Ngaba siyalithobela eli cebiso leBhayibhile? Ukongezelela koko, ngaba ‘sithandaza ngokuqhubekayo,’ nto leyo ibonisa ukuba sixhomekeke kuYehova? (INdu. 85:8) Masingasilibali nesi sibongozo sompostile uPawulos: “Lowo ucinga ukuba umile makalumke angawi.”—1 Kor. 10:12.
12. Kutheni uNehemiya engumzekelo omhle nje kuthi?
12 Cinga ngoNehemiya, owayengumphathi wendebe yoKumkani uArtashashta wasePersi ngenkulungwane yesihlanu B.C.E. UNehemiya ungumzekelo omhle wabantu abazingisayo emthandazweni. Kangangeentsuku, ‘wazila ukutya ethandaza ngokuqhubekayo phambi koThixo’ ngenxa yentlungu awayekuyo amaYuda eYerusalem. (Neh. 1:4) Xa wabuzwa nguArtashashta isizathu sokuba adakumbe, ‘kwaoko uNehemiya wathandaza kuThixo wamazulu.’ (Neh. 2:2-4) Kwaphumela entweni oko? UYehova wawuphendula umthandazo wakhe waza wabangela ukuba kwenziwe izinto ezaba luncedo kubantu bakhe. (Neh. 2:5, 6) Kumele ukuba kwalomeleza gqitha ukholo lukaNehemiya oku!
13, 14. Yintoni esimele siyenze ukuze sihlale sinokholo olomeleleyo size ke sikwazi ukuxhathise imigudu kaSathana yokusidimaza?
13 Ukuthandaza ngokuqhubekayo njengoNehemiya, kusinceda sihlale sinokholo olomeleleyo. USathana akanalusini tu yaye usoloko esihlasela kanye xa sibuthathaka. Ngokomzekelo, xa sigula okanye sixinezelekile, sinokuqalisa ukuvakalelwa ukuba uThixo akaneliswa lixesha elincinane esilichitha entsimini nyanga nganye. Abanye kuthi basenokuba nezinto ezibakhathazayo, mhlawumbi ngenxa yezinto ezithile abakha bazenza ebomini. USathana ufuna sivakalelwe ukuba akukho yethu. Kwindlela asihlasela ngayo usoloko ezama ukudlala ngeemvakalelo zethu ukuze alwenze buthathaka ukholo lwethu. Noko ke, xa ‘sikuphaphele ukuthandaza’ siya kuhlala sinokholo olomeleleyo. Enyanisweni, ‘ngekhaka elikhulu lokholo, siya kuthi sikwazi ukucima yonke imijukujelwa evuthayo yalowo ungendawo.’—Efe. 6:16.
Ukuhlala ‘sikuphaphele ukuthandaza’ kusinceda sikwazi ukujamelana neengxaki ezahlukahlukeneyo (Funda isiqendu 13, 14)
14 Ukuba ‘sikuphaphele ukuthandaza,’ asiyi kubanjiswa singalindelanga size ke silahle ukholo lwethu xa sivavanywa. Xa sivavanywa, simele sikhumbule umzekelo kaNehemiya size sikhawuleze sithandaze kuThixo. NguYehova kuphela onokusinceda sixhathise izilingo neemvavanyo zokholo lwethu.
15. Yiyiphi imibuzo esimele sizibuze yona ngokuphathelele ukuthandazela abanye?
15 UYesu wenzela uPetros isikhungo ukuze ukholo lwalo mpostile lungabi buthathaka. (Luka 22:32) UmKristu othembekileyo owayephila ngenkulungwane yokuqala uEpafra, wamxelisa uYesu kule nkalo kuba wazibhokoxa ethandazela abazalwana bakhe abaseKolose. UPawulos wababhalela wathi: “Usoloko enithandazela, ukuze ekugqibeleni nime ngokuqinileyo ningahexi kuko konke ukuthanda kukaThixo.” (Kol. 4:12) Nathi simele sizibuze oku: ‘Ngaba ndisoloko ndibathandazela abazalwana bam abasehlabathini? Ngaba ndiyabakhumbula abazalwana abathwaxwa ziintlekele zemvelo xa ndithandaza? Ndagqibela nini ukuthandazela abo basingatha iimbopheleleko ezinzima kwintlangano kaYehova? Ngaba ukho umntu osebunzimeni endikhe ndamthandazela mvanje ebandleni?’
16. Ngaba kubalulekile ukuthandazela abanye? Cacisa.
16 Ukuthandazela abanye kuYehova kunokubanceda ngokwenene. (Funda eyesi-2 kwabaseKorinte 1:11.) Nakuba uYehova enganyanzelekanga ukuba asincede kuba nje kukho iqela labakhonzi bakhe abasoloko besithandazela, uyaziva izibongozo zabo aze akubone ukunyaniseka kwabo njengoko ephendula imithandazo yabo. Ngoko ke, simele silixabise ilungelo nembopheleleko esinayo yokuthandazela abanye. NjengoEpafra, simele sibonise uthando nenkxalabo yokwenene ngabazalwana noodadewethu ngokuzingisa ekubathandazeleni. Ukwenjenjalo kuya kusenza sonwabe ngakumbi, kuba “kunoyolo ngakumbi ukupha kunokwamkela.”—IZe. 20:35.
“USINDISO LWETHU LUKUFUPHI”
17, 18. Kuya kusinceda njani ukuhlala ‘sikuphaphele ukuthandaza’?
17 Ngaphambi nje kokuba achaze ukuba “ubusuku buhambile; imini isondele,” uPawulos wathi: ‘Niyalazi ixesha, okokuba sele kulilixa lokuba nivuke ebuthongweni, kuba ngoku usindiso lwethu lukufuphi ngakumbi kunangexesha esathi saba ngamakholwa ngalo.” (Roma 13:11, 12) Ihlabathi elitsha elithenjiswe nguThixo likufuphi, yaye usindiso lwethu lukufuphi kunokuba sicinga. Asimele sibiwe bubuthongo sityeshele ulwalamano lwethu noThixo, size sivumele iziphazamiso zeli hlabathi zisityele ixesha lokuthandaza kuYehova. Kunoko simele ‘sikuphaphele ukuthandaza.’ Ukwenjenjalo kuya kusinceda sixakeke ‘yihambo engcwele nezenzo zozinikelo lobuthixo, njengoko silindele imini kaYehova.’ (2 Pet. 3:11, 12) Indlela esiphila ngayo yiyo eya kubonisa ukuba sithe qwa yaye sikholelwa ngokwenene ukuba le nkqubo yezinto ingendawo sele iza kuphela. Ngamana ke ‘singathandaza ngokungapheziyo.’ (1 Tes. 5:17) Masixelise noYesu ngokuzama ukufumana amathuba okuba sedwa ukuze sithandaze. Ukuba siba nexesha elaneleyo lokuthandaza kuYehova, siya kusondela ngakumbi kuye. (Yak. 4:7, 8) Siya kuzuza iintsikelelo ezingathethekiyo ngokwenjenjalo!
18 IZibhalo zithi: “Ngemihla yenyama yakhe uKristu wanikela izikhungo kwanezibongozo kuLowo wayekwazi ukumsindisa ekufeni, esitsho ngezikhalo ezinamandla neenyembezi, yaye waviwa ngokukholekileyo ngenxa yoloyiko lwakhe lobuthixo.” (Heb. 5:7) UYesu wenza izikhungo nezibongozo waza wahlala ethembekile kuThixo de kwasa ekufeni. Ngenxa yoko, uYehova wamsindisa ekufeni lo Nyana wakhe uyintanda waza wamjizeka ngobomi bokungafi ezulwini. Nathi sinako ukuhlala sithembekile kuBawo wethu wasezulwini, kungakhathaliseki ukuba ziziphi iimvavanyo nezilingo esijamelana nazo ebomini. Enyanisweni, sonokuvuzwa ngobomi obungunaphakade—ukuba nje sihlala ‘sikuphaphele ukuthandaza.’